Radio Don Bosco - Ampela mihary
Tanjona ara-pahasalamana, fanampiana ny rehetra...
Naseho ny : 1 marsa 2021
Ny fandaharana dia namaritra tetiandro, indrindra amin'ity taona ity dia ny firesahana ny tanjona ara-pahasalamana mahakasika ny vehivavy. Mba hanampiana ny vehivavy ohatra ny firesahana ny antony mankarary kibo ny vehivavy rehefa ao anatin'ny fadimbolana ; satria potika sy miharava ny rindrin'ny tranon-jaza. Misoroka ny fanaintaina ny fisotroana rano mafana...
Ny psikolojia an'ny ankizy...
Naseho ny : 22 febroary 2021
Ny psikolojia na ny dingam-pivoaran'ny toe-tsain'ny olona iray manaraka ny taoanay ka misongadina ny an'ny ankizy ao anatin'ny vanim-potoana ny fahamaotiana. Ny zaza dia hatramin'ny faha 12 taonany fa manomboka amin'ny faha 13 taona hatramin'ny 15 dia efa miroso amin'ny mahatanora azy, io ilay vanim-potoana fahamaotiana. Amin'io vanim-potoana io dia manahirana ny mitaiza ny ankizy : be famaliana, varimbariana...
Manena ny toaka sotroina...
Naseho ny : 15 febroary 2021
Lafim-piainana iray ny fahasalamana ka hamaritàna tanjona dia ny fanenana ny toaka sotroina. Raha "manena" no teny nosafidiana dia mbola misotro izany fa ny fatra no nihakely, izany hoe mbola tsy tapaka ny fiankinandoha. Io no mamaritra ny lanjan'ny fiankinandoha, mila mazava: firy no laninao isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana? Inona no mitranga mahatonga anao hanapa-kevitra hampihena ny fisotroana ?...
Toe-tsaina fototra ho entina miaina...
Naseho ny : 8 febroary 2021
Ny toe-tsaina ho entina miatrika fiainana. safidy ny an'ny tsirairay na hanaiky iharany na handray an-tànana ny fiainana sy hanova zavatra ary resy lahatra hitondra anjara hanatsaràna ny fiainana. Aza miandry ny hafa fa manana hery anaty ianao...
Pejy 4 amin'ny 13